ကျွှန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ 443 ပရုပ်ဆီလေးပါ — MYSTERY ZILLION
ကျွှန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ 443 ပရုပ်ဆီလေးပါ
အခုအင်တာနက်တွေက တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ ။ တော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာဗျ။ ရုံးမှာလဲအထောင်းကခံရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ ဒီပရုပ်ဆီလေးကိုတွေ့တော့တော်တော်လေးကိုပျော်သွားတယ်။ သိတဲ့လူတွေလည်းသိကြမှာပါ ကျွှန်တော့်လိုမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
အပာင်.အပာင်. ဒီထဲမှာမှချရေးရတယ်လို.အစ်ကိုယ်ရယ်၊ ဒါလေးတွေနဲ.အသက်ဆက်နေရတာ ၊ အခုတော.သက်ဆိုးရှည်ပါတော.မလားမသိဘူး။
ကောင်းအတူတူဆိုးအတူတူပေါ့ ဗျာ ။ ပိတ်တော့လဲပိတ်ပေါ့ ။ အသစ်ထပ်တွေ့အုံးမှာပါရမှာပါ။ မသိတဲ့လူတွေအတွက်ပါဗျာ
IPstar မှာ သုံးရမယ် proxy လေးလဲ တင်ပေးကြပါအုံး
REVIVER wrote: »
IPstar မှာက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Proxy နဲ့ပဲသုံးလို့ ရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာက ygncache5 နဲ့ပါ။ သွားချင်တဲ့ဆီ ရောက်အောင်သွားဖို့တော့
Browser Addon လေးပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။
ipstar လိုင်းက Squid လို server မျိုးမှာ transparent proxy အနေနဲ့ထားပြီးတော့ သုံးမယ့် client ကနေ Proxy ထည့်သုံးရင်ရောဖြစ်နိုင်လား ။
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. proxy ထည့်သုံးမှရမဲ့့လိုင်းဆိုရင် Squid ထိုင်ပြီး Transparent လုပ်ထားလဲ Squid conf မှာ Parent proxy ထည့်ကိုထည့်ရမှာပဲ .. ဘာသုံးသုံး parent proxy ပေါ်ကနေပဲဖြတ်သွားနေမှာပဲ ။
Client တွေမှာ proxy Setting လိုက်ထည့်စရာမလိုတာပဲထူးမှာပါ ။
Bagan Net ADSL အတွက်ကော သုံးလို့ရလား ခင်ဗျ?
ကျွန်တော်ကတော့ စမ်းကြည့်တာ မအောင်မြင်ဘူး ဗျ...
matthanlon wrote: »
ကျွှန်တော်ပြောချင်တာက parent proxy (203.81.64.36) bagan proxy ကို squid server က auto forwarding လုပ်ပေးတယ်။ client မှာ ကျော်လို့ရတဲ့ proxy ထည့်ပေးလိုက်ရင် လက်ရှိ bagan proxy ပေါ်ကနေ port forwarding နဲ့ ထွက်မလား မထွက်ဘူးလား သိချင်တာပါ။
thiha.kk wrote: »
ှServer မှာ Port Forwarding လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် Server မှာသုံးလို့ရတဲ့ Proxy မှန်သမျှ Client မှာ သုံးလို့ရပါမယ် ။ ဥပမာ .. Client တွေက local proxy ကိုသုံးနိုင်သလို Parent (203.81.64.36) ကိုလဲ တိုက်ရိုက်လှမ်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျော်တဲ့ Proxy (Port:443) တွေ Server ပေါ်မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် Client တွေကလဲ Browser မှာတိုက်ရိုက်ထည့်သုံးလို့ရပါမယ် ။ ဒါပေမဲ့ no proxy access မရပဲ Proxy ထည့်သုံးရတဲ့ လိုင်းတွေက ကျော်တဲ့ Proxy တွေ (Port:443) ကိုသုံးလို့မရသလောက်ပါပဲ ။
MPT နဲ့ အဆင်မပြေဘူးဗျ။ ဝိုင်မက်စ်တို့ ပုဂံတို့တော့ မပြောတက်ဘူး
အခုလို မျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်